पप स्टार बियन्सेले ८० हजार माहुरी पालेकी छिन, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ तपाईं ! | पप स्टार बियन्सेले ८० हजार माहुरी पालेकी छिन, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ तपाईं ! |
पप स्टार बियन्सेले ८० हजार माहुरी पालेकी छिन, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ तपाईं !
वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी पप गायिका बियन्सेले ८० हजार माहुरी पालेका कारण चर्चामा छिन । गायिका आफैंले एउटा अन्तर्वार्तामा खुलासा गरिन् कि उनी आफ्नो घरमा माहुरीको ठूलो संख्या पाल्छिन । यो समाचारले मानिसहरुलाई आश्चर्यचकित पारेका छन । आउनुहोस् हामी यसबारे सम्पूर्ण कुरा बताउँछौ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... मन्त्रालयको निर्देशन:डेङ्गु रोग फैलिरहेको बेला स्वास्थ्यकर्मी अस्पातल छोडेर बिदामा नबस्नु
ब्रिटिश वोग पत्रिकालाई एउटा अन्तर्वार्तामा बियन्सेले माहुरीपालनको बारेमा बताएकी हुन । उनले भनिन ‘मलाई थाहा छ यो अनौठो हो, तर मसँग दुईवटा माहुरीपाल छ। यो केहि समयको लागि मेरो घरमा छ । बियन्सेले यो पनि भनिन् कि उनले माहुरीबाट होम मेड हनी बनाउँछिन्। उनले भने, ‘मसँग ८० हजार मौरीहरू छन् र हामी एक वर्षमा धेरै क्यान (मह) बनाउँछौं।’
यो पनि पढ्नुहोस् ... वाइबाका ४ गजल,बेचियो जवानी खाडीमा
गायिकाले थपिन- ‘मैले यो शुरु गरें किनकि मेरा दुवै छोरी आइभी र रुमीलाई गम्भीर एलर्जी छ। र महमा कुनै पनि घाउहरू निको पार्ने गुणहरू हुन्छन् । एक प्रसिद्ध गायिका, फेसन डिजाइनर, अमेरिकाको सांस्कृतिक आइकनको साथ बियन्सेले अब माहुरीपालनमा आफ्नो प्रतिभा देखाईएको छ। उनी यसकारण चर्चामा छिन ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... परदेशिएको हो (कविता) बिनु लुइँटेल
अन्तर्वार्तामा बियन्सेले लकडाउनको समयको बारेमा पनि बताइन । उनी भन्छिन कि उनी परिवारसँग फेशन फ्राइडेज खेल्थिन । प्रत्येक शुक्रवार, तिनीहरू राम्रो लुगा लगाउँथे र एक अर्काको फोटोहरू लिन्थे । यस तरिकाले उनले क्वारेन्टाइनमा राम्रो समय बिताए।
सौगात जंग थापा र मेलिनाको स्वरमा “मैले गर्ने